'अवको पाँच बर्षभित्र एनआइसी एशिया बैंक हरेक हिसावले नम्बर १ हुनेछ' (अन्तर्वार्ता)
IPO/FPO Result अर्थ सरोकार टेलिभिजन अर्थ सरोकार रेडियो
ARCHIVE, BANKING, FEATURED, INTERVIEW, SPECIAL » 'अवको पाँच बर्षभित्र एनआइसी एशिया बैंक हरेक हिसावले नम्बर १ हुनेछ' (अन्तर्वार्ता)
काठमाडौँ- रोशन न्यौपाने अर्थात साखा र एटिएम सञ्जालका हिसावले निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो बन्न सफल भएको बैंकका कामु सीईओ । शंकरदेव क्याम्पसमा बिबिएस सकेर नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) मा चार्टड एकाउन्टेन्सी पढ्न भर्ना हुँदा उनीसँग पास भएपछि अडिट फर्म खोल्ने सोच थियो । सिएको दोश्रो तह पास गरेपछि सीएससीमा 'आर्टिकलशिप' (सिएको पढाइमा गर्नुपर्ने इन्ट्रनशिप- पंजीकृत प्रशिक्षण) गर्दा होस्, वा त्यसपछी एसआर पाण्डेको अडिट फर्ममा काम गर्दा होस्, उनीसँग सिए फर्म खोल्ने र अडिटर हुने 'भिजन' थियो । तर समयले उनलाई बैंकर बनायो । उनी बैंकिङ जागिरमा प्रवेश गरे । इन्टरनल अडिटरको रुपमा जुनियर अफिसर भएर बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उनले त्यसपछि विभिन्न विभागको प्रमुख भएर जिम्मेवारी सम्हाल्न पाए । छोटो समयमा नै उनी नाम कहलिने बैंकर भए ।
बैंक अफ एसिया र एनआइसी बैंक बैंक 'मर्ज' भएर एनआइसी एसिया बैंक भएपछि उनको करियरको रफ्तार झन् अगाडी बढ्यो । २००६ सालमा सिए पास गरेका उनी २०१८ सम्म आइपुग्दा नेपालको नीजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो बैंकको कामु सीईओ भइसकेका छन् । यो १२ बर्षको करियरमा उनले जुन रफ्तारले प्रगति गरेका छन्, त्यो धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत त पक्कै छ नै, उनलाई आदर्श मान्नेहरुको भीड पनि सानो छैन । मिझासिलो व्यवहार, 'फिट एण्ड फाइन' जिउडाल, मिठो र प्रष्ट बोली भएका उनै रोशन न्यौपानेसँग आजको अंकमा हामीले उनको करियरका कुराकानी समेटेका छौं । यो कुराकानीमा हामीले एनआइसी एसिया बैंकका बारेमा त जरुर कुरा गरेका छौं नै, उनको पढाइदेखिको बैंकको कामु सीईओसम्मको यात्रालाई पनि समेट्ने प्रयास गरेका छौं । प्रस्तुत छ अर्थ सरोकारकर्मी सुरज प्याकुरेलले एनआइसी एसिया बैंकका कामु सीईओ चार्टड एकाउन्टेन्ट रोशन न्यौपानेसँग गरेको कुराकानी ।
१. 'रोशन न्यौपानेसँग अडिट फर्मको निकै राम्रो भिजन थियो' भनेर तपाईंका साथीहरुले सुनाउँछन्, चार्टड एकाउन्टेन्सी उतिर्ण भएपछी बैंकिङमा करियर बनाउँछु भन्ने सोच कसरी आयो ?
खासमा मेरो सोच अडिट फर्म खोल्छु नै भन्ने थियो । राम्रो अडिटर बन्छु भन्ने नै थियो । तर अडिट फर्ममा काम गर्दा गर्दै बैंकको पनि अनुभव लिउँ जस्तो लाग्यो । यहि सोचले बैंकको जागिरे भएँ । मैले इन्टरनल अडिटरको रुपमा बैंकको जागिरको सुरुवात गरेको हुँ । जुनियर अफिसर पद थियो । त्यसपछी त बैंकमै रमाईयो । बैंकमै राम्रो काम गर्ने उत्साह बढ्यो । करियरमा त्यहि अनुसारको 'ग्रोथ' पनि भयो । त्यसपछी सिए फर्म खोल्न भन्दा पनि बैंकिङमै मन बस्यो । तर के चाहिं हो भने सिए पढ्दा देखि नै मेरो सोच राम्रो अडिटर बन्ने नै थियो ।
२. सिए पास भएको १२ बर्षमै एनआइसी एसियाजस्तो ठूलो बैंकको कामु सीईओ भइसक्नुभएको छ । कामु सीईओ हुन अलि चाँडो भएन र ?
मैले यसलाई समयको माग भन्छु । ढिलो चाँडो भन्दा पनि सायद यो आवश्यकता थियो । बैंकिङ करियरको सुरुदेखि आजसम्म आइपुग्दा मैले सानो मेहेनत गरेको छैन । सायद त्यसैको प्रतिफल हुनुपर्छ यो । चाँडो भएकोचाहिं होइन । तर जुन-जुन बैंकमा चार्टड एकाउन्टेन्टहरु सीईओ हुनुभएको छ, म कान्छो चाहिं हुँ । त्यहि भएर पनि धेरैले 'अलि चाँडो' भयो भन्नुभएको होला । तर मलाई त यो समयको स्वाभाविक कुरा लागेको छ ।
३. तपाईं बैंकको सीईओ हुँदा तर तपाईंका समकालीन साथीहरु तपाईंको बैंकको 'अडिट' माग्नसमेत हैसियत राख्दैनन् भन्ने चर्चा छ नि बजारमा ?
त्यस्तो होइन । अहँ मलाइ त्यस्तो लाग्दैन । मेरा समकालीन साथीहरुले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ । उहाँहरु अहिले धेरै राम्रो राम्रो ठाउँमा उच्च अहोदामा हुनुहुन्छ । फर्म खोलेर बस्ने साथीहरुले पनि धेरै राम्रो गर्नुभएको छ । मेरा समकालीन साथीहरुसँग मेरो कुरा भइरहन्छ । उहाँहरुले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ । सबै सेटल भएका छन् । काम गर्ने एरिया फरक होला, तर सबैले राम्रो गर्नुभएको छ ।
४. तपाईं कान्छो भएकै कारणले अरु बैंकमा सीईओ भएका सिएहरुले अलि पेल्न खोज्ने गरेका छन् भन्ने सुनिएको छ नि ! केहि समय अगाडी बैंकर्स संघका अध्यक्षले पनि त्यहि गर्नुभयो भन्ने चर्चा बाहिर आयो । कुरा के हो ?
हामी केहि फरक हिसावले बजारमा आयौं । आजको दिनमा हाम्रो 'ग्रोथ'को रेसियो अरु बैंकको भन्दा निकै राम्रो छ । हामी हरेक कुरामा अब्बल हुँदै गएका छौं । साखा र एटिएम सञ्जालमा त हामी निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो बैंक भइसकेका छौं । डिपोजिटको मामलामा होस् वा बिजनेश ग्रोथका हिसावमा हामी अब्बल छौं । बजारको ठुलो हिस्सामा हाम्रो पक्कड छ । 'एफ्टर अल' यो 'कम्पिटिसन'को मार्केट हो । त्यसो भएका हुनाले केहि स्वाभाविक 'रिएक्सन'हरु आएका होलान् । त्यसलाई मैले स्वाभाविक रुपमा नै लिएको छु ।
५. तर एनआइसी एसिया बैंकले त अरु बैंकको डिपोजिट, लोन, स्टाफ केहि पनि तान्न छोडेन भन्ने आरोप अरु बैंकका सीईओहरुको छ नि ! यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
राम्रो क्लाइन्ट, राम्रो डिपोजिट, राम्रो स्टाफ अन्त जाँदा आउने स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो यो पनि । 'तर एउटा क्लाइन्ट किन एउटा बैंक छोडेर अर्कोमा जान्छ ? डिपोजिट किन एउटा ग्राहकले एनआइसी एसिया बैंकमा राख्छ वा राम्रो स्टाफ किन हामीकहाँ आइरहेको छ ?' भन्ने कुराचाहिं बुझ्न जरुरी छ । हामीले केहि पनि कुरा जवरजस्त गरेका छैनौं । यो स्वोभाविक बिजनेशको प्रक्रिया हो ।
६. तपाईंहरुले ब्रान्डीङको मामलामा होस् वा साखा सञ्जालको मामलामा, केहि फरक अभ्यास गर्नुभयो । अहिले प्राय अरु बैंकले पनि त्यहि बाटोमा लागेको देख्दा कस्तो लाग्छ ?
यो हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि निकै सकारात्कम कुरा हो । जनताको विश्वास जित्न ब्राण्डको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । दुर दराजमा बैंकको साखा पुग्नु अर्को सकारात्मक कुरा हो । सबै नागरिकको पहुँचमा बैंक पुग्नु झन् राम्रो कुरा हो । हामीले धेरै त्यस्ता ठाउँहरुमा पनि साखा विस्तार गरेका छौं, जहाँ कमर्सियल बैंकको उपस्थिति नै थिएन । अहिले हामीले धेरै ग्राहकको माया पाएका छौं । हामीले सबै बर्गमा बैंकिङ पहुँच पुर्याउन सक्दो मेहेनत गरिरहेका छौं । सबैको भलो गर्न हामीले सकेसम्म कोसिस गरिरहेका छौं । यहि कोशिसले हामीलाई 'बैंक अफ मास' बनाएको छ । हामीलाई विश्वास गर्नेहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।
७. तर तपाईंले यसो भन्दै गर्दा बिकट ठाउँहरुमा खोलिएका कतिपय साखाहरु त औपचारिकताका लागि मात्र छन् भन्ने चर्चा छ नि बजारमा ? राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण पनि यस्तो भएको छ भन्ने गरिन्छ, तपाईंको यसमा प्रतिक्रिया के छ ?
यस विषयमा अरु बैंकको बारेमा मलाइ खास आइडिया छैन, तर हाम्रो व्यापारको ठूलो हिस्सा मोफसलमा छ । हाम्रो कुल बिजनेशमध्ये सानो हिस्सामात्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र छ । त्यसैले हामीले त झन् मोफसललाई 'फोकस' गरिरहेका छौं । एउटा धनी मान्छे झन् धनी हुनुभन्दा एउटा गरिव मान्छे कम गरिव हुनु सकारात्मक कुरा हो । यो प्रक्रिया मोफसलमा बढी छ । बैंक काठमाडौँ भन्दा पनि दुरदराजमा जान झन् जरुरी छ । त्यहाँ बिजनेश छैन भन्ने कुरा म मान्दिन । त्यहाँ निकै ठूलो बिजनेश एरिया छ । एनआइसी एसिया बैंकको हकमा भन्नुहुन्छ भने हामी बैंकनै नभएको ठाउँमा पनि पुगेका छौं । त्यहाँ पनि बिजनेश छ ।
८. अहिलेको बैंकिङ बजारमा एनआइसी एसिया बैंकको स्ट्याटस के हो ?
हामी धेरै कुरामा अब्बल भइसकेका छौं । हामी 'स्ट्र्याटिजिक' प्लान बनाएर अघि बढेका छौं । हाम्रो ग्रोथ रोकिएको छैन । हामी धेरै कुरामा नम्बर वान पनि भइसकेका छौं । केहि समयको अन्तरालमा हामी ११-१२ स्थानबाट उत्कृष्ट पाँचभित्र परिसकेका छौं । अहिले बैंकलाई धेरैले माया गरिदिनुभएको छ । विश्वास गरिदिनुभएको छ ।
९. अवको १० बर्षमा चाहिं एनआइसी एसिया बैंकको यो स्ट्याटस कहाँ पुग्छ ?
१० बर्ष लाग्दैन । अवको केहि बर्षमा हामी नेपालको नम्बर वान बैंक बन्न अब केहि कुराले पनि रोक्न सक्दैन । १० बर्ष भनेको त धेरै लामो समय हो । अव झन्डै ५ बर्ष वा त्यो भन्दा पनि कम समयमा हामी हरेक हिसावले नेपालको नम्बर वान बैंक बन्नेछौं । हामी सोहि अनुसार काम गरिरहेका छौं ।
१०. सबै कुरामा अब्बल भएको एनआइसी एसिया बैंक नाफामा किन अब्बल हुन सकेन त ?
यो बेला धेरै साखाहरु खुले । त्यसको ठुलो 'कष्ट' छ । यहि कारण हामी नाफामा सर्वोत्कृष्ट बन्न नसकेका हौँ । तर साखा खोल्दा हुने ठुलो 'कष्ट' सधैं हुने होइन । त्यहि भएका कारण अवको केहि बर्षमा हामी नाफा वितरणमा पनि पहिलो नम्बरमा आउंछौं भन्ने कुरामा कुनै शंका नै छैन ।
११.बैंकमा केहि समय अगाडी स्वीफ्ट प्रकरण भयो । बीचमा बैंकर्स संघले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्यो । यो कुराले बैंकलाई कस्तो असर गर्यो ? बैंकर्स संघ सँगको 'रिलेशनशिप स्ट्याटस' के छ ?
स्वीफ्ट प्रकरणले खास त्यस्तो असर गरेन । त्यो एउटा दुर्घटना थियो । सत्य-तथ्य बाहिर आइसकेको छ । त्यसले हाम्रा ग्राहकहरुको मानोबिज्ञानमा खास असर गरेन । बैंकर्स संघको कुरा पनि एउटा 'इभेन्ट' थियो, त्यो अहिले सबै राम्रो बन्दै गएको छ । अहिले नियामक राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघ र अरु स्टेकहोल्डरसँग पनि हाम्रो निकै राम्रो सम्बन्ध छ ।
१२. जुन हिसावले तपाईंहरु एग्रेसिभ भएर आउनु भएको छ सबै कुराहरुमा, यसमा कतै न कतै ठुलो 'रिस्क' देख्नुहुन्न ?
हामी कर्पोरेट गभर्नेन्सको कुरामा एकदम बलियो छौं । सजग पनि छौं । हामी जसरी काठमाडौँदेखि दुरदराजका ठाउँमा बैंकिङ पहुँच पुग्नुपर्छ भनेर लागेका छौं, त्यसले रिस्क बढेको होइन घटेको छ । हामीले सुरु गरेका कतिपय कुराहरुलाई अहिले अरु बैंकहरुले पनि अनुसरण गर्नुभएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । बैंकहरुबीच जति स्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा हुन्छ, त्यति नै अर्थतन्त्रका लागि राम्रो कुरा हो । ग्राहकका लागि राम्रो कुरा हो ।
१३. एनआइसी एसिया बैंकले अव 'Full-सीइओ' कहिले पाउँछ ? यसमा तपाईंको सम्भावना कति छ ?
सीईओ छान्ने प्रक्रिया अगाडी बढिरहेको छ । क्यान्डीडेटहरु छान्ने काम भईरहेको छ । मेरो सम्भावना पनि छ । बैंकको समग्र निर्णय पर्खनुबाहेक अहिले केहि भन्न सकिंदैन ।
प्रकाशित : Tuesday, July 31, 2018
होन्डाका बाइकमा भेटिएको 'डिफेक्ट' हेर्न छुट्नु भयो कि ? हेर्नुहोस् EXCLUSIVE भिडियो
Tags : ARCHIVE, BANKING, FEATURED, INTERVIEW, SPECIAL
यी ७ व्यक्तिले भुलेर पनि खानु हुदैन अनार, नत्र पछुताउनु पर्ला !
गोदावरीमा प्रेमलीला ! होस् गर्नुस् है, नत्र फसिएला...!
स्मरण शक्ति बढाउन १० टिप्स : यसरी पढे हत्तपत्त बिर्सिन्न
लुट्नुको पनि हद हुन्छ नि ! १० लाख ७४ हजार रुपैयाँमा नेपाल भित्रिएको गाडीको मूल्य काठमाडौँ आइपुग्दा ५१ लाख
७८ करोड कर तिर्न पत्र आएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्वकर्मचारी बेहोस, '२ अर्ब ४२ करोडको कारोबार थाहै भएन'
बदनाम यी “भाते साहुजी”
मिसन रत्नपार्क :यौनकर्मी भन्छन्, 'पुलिससँग त पूरै सेटिङ हुन्छ'
म मर्न भनेर हिडेको थिए तर ‘छोरा’ सम्झेर फर्किए
जग्गा नापमानसम्बन्धि यी जानकारी तपाईंलाई छ ?
दश हजार कर्मचारीलाई लाइन लगाएर हान्दिए हुन्छ गोली, एक हाइड्रोपावरवालाको आश्चार्यजनक बोली
© अर्थ सरोकार डटकम | अर्थ सरोकार डटकम बारे | अर्थ सरोकार समूह | अर्थ सरोकार टेलिभिजन कार्यक्रम बारे | अर्थ सरोकार रेडियो कार्यक्रम बारे | अनलाइन प्रयोगका सर्त | विज्ञापन नीति
Artha Sarokar (Name and Logo) is registered trademark of Shubham Media Pvt. Ltd. under Department of Industry, Nepal.
सूचना विभाग दर्ता नम्बर : १३३-०७३-०७४, सञ्चालक तथा सम्पादक : सुरज प्याकुरेल, फोन नम्बर : ९८५१०१७९१४, ठेगाना : कोटेश्वर, काठमाडौँ